Duufaanta Katrina, oo kamid ah duufaannadii ugu xumaa ee soo mara taariikhdayada dhow | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta Katrina, sida ay u aragtay dayax gacmeedka NOAA ee GOES-12.
Dhacdooyinka saadaasha hawadu waa dhacdooyin inta badan waxyeello geysta, laakiin aan u badneyn sida kuwa uu sababay Duufaanta Katrina. Ugu yaraan 1833 qof ayaa u dhintey duufaanta lafteeda ama daadad la socdey, taas oo ka dhigeysa tii ugu dhimashada badneyd xilligii duufaantii Atlantik ee 2005 iyo tii labaad ee taariikhda Mareykanka, oo ka dambeysa San Felipe II, 1928.
Laakiin, Maxay tahay asalka iyo dhabbaha duufaantaan xoogga badan, iyadoo ku dhawaaqista magaceeda, isla markiiba maskaxda ku hayso sawirada burburka ay uga tagtay Mareykanka?
1 Taariikhda Duufaanta Katrina
2 Tallaabooyin noocee ah ayaa loo qaaday si looga fogaado waxyeelo?
3 Khasaara intee le’eg ayuu gaystay?
3.2 Waxyeello soo gaadhay
3.3 Saameynta deegaanka
3.4 Saamaynta ay ku leedahay dadka
4 Ma la qaaday tallaabooyinkii ku habboonaa?
Taariikhda Duufaanta Katrina
In laga hadlo Katrina waa in laga hadlo New Orleans, Mississippi, iyo wadamo kale oo dhib ka soo maray marinka duufaantan kuleylaha ah. Waa duufaantii laba iyo tobnaad ee abuurtay xilligii duufaanta ee 2005, gaar ahaan Agoosto 23, koonfur-bari ee Bahamas. Waxay ahayd natiijada isku-xirnaanta mowjadaha kulaylaha iyo Tropical Depression Diez, oo la sameeyay Agoosto 13.
Nidaamku wuxuu gaadhay heerka duufaanka kulaylaha maalin uun ka dib, Agoosto 24, maalintaas oo loo bixin doono Katrina. Jidka soo socda wuxuu ahaa kuwan soo socda:
August 23: u jiheystay dhanka Xeebta Hallandale iyo Aventura. Markay soo degtay dhulka way daciiftay, laakiin saacad ka dib, markii ay soo gashay Gacanka Mexico, mar kale ayay sii xoogeysatay oo dib u heshay xaaladdeedii duufaan.
August 27: Waxay gaadhay heerka 3aad ee qiyaasta Saffir-Simpson, laakiin wareeg wareeg ah oo lagu beddelayo derbiga isha ayaa sababay inuu labanlaab noqdo. Xoojinta degdegga ah waxaa sabab u ahaa biyaha diirran ee aan caadiga ahayn, oo sababay dabaysha inay xawaare ku socoto. Sidaa darteed, maalintii ku xigtay waxay soo gaadhay qaybta 5.
August 29: Waxay soo caga dhigatay markii labaad duufaan Nooca 3 ah oo u dhow Buras (Louisiana), Breton, Louisiana iyo Mississipi oo leh dabaylo 195km / h.
August 31: waxay hoos ugu dhacday diiqad kuleyl ah oo u dhow Clarksville (Tennessee), waxayna sii waday wadadeeda harooyinka waaweyn.
Aakhirkii, waxay noqotay duufaan dabeecadeed oo woqooyi bari u dhaqaaqday oo saamaysay bariga Kanada.
Tallaabooyin noocee ah ayaa loo qaaday si looga fogaado waxyeelo?
Xarunta Duufaanta Qaranka (CNH) waxay soo saartay ilaalin duufaan ah koonfurta-bari ee Louisiana, Mississipi iyo Alabama markay ahayd Agoosto 27 ka dib markaan dib u eegay dariiqa suuragalka ah ee duufaantu raaci lahayd. Isla maalintaas, Ilaalada Xeebaha ee Mareykanka waxay fuliyeen hawlgallo badbaadin oo isdaba joog ah oo laga soo qaaday Texas ilaa Florida.
Madaxweynihii Mareykanka ee xilligaas, George W. Bush wuxuu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah Louisiana, Alabama iyo Mississippi bishii Agoosto 27. Galabtii, CNH waxay soo saartay digniin duufaan ah oo ku saabsan xeebta u dhaxeysa Morgan City (Louisiana) iyo xadka u dhexeeya Alabama iyo Floridalaba iyo toban saac ka dib digniinta ugu horreysa.
Ilaa waqtigaas, qofna ma lahan karo tilmaam sida burburka Katrina aakhirka ahaan doono. Ogeysiis ayaa laga soo saaray xafiiska New Orleans / Baton Rouge ee Adeegga Cimilada Qaranka oo ka digaya in aaggu uu sii ahaan karo mid aan la noolaan karin toddobaadyo.. Bishii Agoosto 28, Bush wuxuu la hadlay Badhasaabka Blanco si uu ugula taliyo in qasab looga raro New Orleans.
Guud ahaan, ilaa 1,2 milyan oo qof oo ka yimid Xeebta Gacanka iyo sidoo kale inta badan kuwa ku sugan New Orleans waa in la daad gureeyo.
Khasaara intee le’eg ayuu gaystay?
Tani waa sida Mississipi looga tagay duufaanta kadib.
Duufaanta Katrina sababay dhimashada 1833 qof: 2 Alabama, 2 Georgia, 14 Florida, 238 Mississipi iyo 1577 Louisiana. Intaa waxaa dheer, waxaa jiray 135 la waayey.
Waxyeello soo gaadhay
en el koonfurta Florida iyo Cuba waxaa jiray waxyeelo lagu qiyaasay hal ilaa laba bilyan oo doolar, inta badan waxaa sabab u ah daadadka iyo geedaha soo go'ay. Waxaa Florida ka da'ay roob la taaban karo, oo leh 250mm, iyo Cuba, oo leh 200mm. Magaalada Cuba ee Batabanó ayaa 90% daadadku qaadeen.
En Luisiana Roobab ayaa sidoo kale ahaa kuwo aad uxun, laga soo bilaabo 200 ilaa 250mm, taas oo sababtay in heerka harada Pontchartrain ay sare u kacdo, taas oo iyana ku fatahay magaalooyinka u dhexeeya Slidell iyo Mandeville. Buundada 'I-10 Twin Span Bridge', oo isku xidha Slidell iyo New Orleans, waa la burburiyay.
En New Orleans roobabku waxay ahaayeen kuwo aad u xoog badan oo magaalada oo dhan ficil ahaan ku fatahay. Intaa waxaa dheer, Katrina waxay sababtay 53 jebinta nidaamka levee ee ilaaliya. Wadooyinku ma ahayn kuwo la geli karo, marka laga reebo Isku-xidhka Magaalada Bisha Cas, marka waxay uga bixi karaan magaalada oo keliya.
En Mississippi, wuxuu sababay burbur lagu qiyaasay balaayiin doolar buundooyinka, doomaha, gawaarida, guryaha iyo qalcadaha. Duufaanta ayaa dhex jeexjeexday, taasoo keentay in 82 degmo lagu dhawaaqo aagag masiibooyinka aagagga gargaarka federaalka ah.
en el Koonfur-bari US dabaylo 107km / saacaddii ah ayaa laga diiwaan geliyay Alabama, halkaas oo ay sidoo kale ka soo baxeen afar duufaanno. Jasiiradda Dauphin ayaa si xun waxyeello u soo gaadhay. Natiijada ka dhalatay duufaanta, xeebaha waa la baabi'iyay.
Markii ay u sii jeeday woqooyiga oo ay daciiftay, Katrina wali way ku xooganayd inay daadad ka dhaliso Kentucky, West Virginia, iyo Ohio.
Guud ahaan, burburka hantida waxaa lagu qiyaasay $ 108 milyan.
Markii aan ka hadalno duufaannada waxaan u maleyneynaa dhibaatada ay u geystaan ​​magaalooyinka iyo magaalooyinka, taas oo dabcan macquul tahay tan iyo markii aan nolosheena ku sameyno meelahaas. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood way dhacdaa in mid ka mid ah dhacdooyinkaas uu dhaawac culus u geysto deegaanka. Katrina-na waxay ka mid ahayd.
La burburiyey qiyaastii 560km2 oo dhul ah oo ku taal Louisiana, sida uu sheegay Sahanka Cilmiga dhulka ee Mareykanka, meelaha qaar oo ay ku yaalliin caleemaha bunni, qoolley, kalluun iyo naas-nuujiyayaal badan oo badda ku nool. Taasna kaliya maahan, laakiin waxay ahayd in la xidho lix iyo toban hoyga duurjoogta ah.
Gudaha Louisiana, waxaa jiray saliid ku daadatay 44 xarumood oo ku yaal Koonfur-bari, oo loo turjumay 26 milyan oo litir. Badankood waa la xakameeyay, laakiin kuwa kale waxay gaareen nidaamka deegaanka iyo magaalada Meraux.
Saamaynta ay ku leedahay dadka
Markaad cunto iyo biyo u waydo, waxaad samaysaa wax kasta oo ay kugu qaadanayso inaad ku hesho. Laakiin adigu kaligaa ma noqonaysid wax dhaca oo wax xada - sidoo kale dadka rabshadaha wata ayaa noqon doona. Taasi waxay si sax ah u ahayd wixii ka dhacay Mareykanka. Ilaalada Qaranka Mareykanka la geeyay 58.000 oo askari inay isku dayaan inay xukumaan magaalooyinka, inkasta oo ayan u fududayn: heerka dilku wuxuu dhacay bishii Sebtember 2005 ilaa Febraayo 2006 wuxuu kordhay 28%, gaaraya 170 dil.
Ma la qaaday tallaabooyinkii ku habboonaa?
Guri waxyeelo ka soo gaadhay Florida kadib duufaantii Katrina.
Waxaa jira kuwa sidaas u maleynaya Dowladda Mareykanku ma aysan sameynin wax kasta oo suuragal ah si looga fogaado khasaaraha dadka. Rapper Kanye West mar uu ka hadlayey riwaayad faa iido ah oo laga qabtay NBC ayuu yidhi "George Bush dan kama lihi dadka madow" Madaxweynihii hore ayaa kajawaabey eedeyntan asaga oo sheegay in tani ay tahay waqtigii ugu xumaa ee madaxtinimadiisa, asaga oo si xaq daro ah isugu eedeeyey cunsuriyad.
John prescott, Raiisel wasaare kuxigeenkii hore ee Boqortooyada Midowday, wuxuu yiri "daadadka halista ah ee ka socda New Orleans waxay nagu soo dhoweynayaan walaacyada hogaamiyaasha wadamada sida Maldives, oo umadooda ay qatar ugu jiraan inay gebi ahaanba baaba'aan. Mareykanku wuu ka caga jiiday baratakoolka Kyoto, oo aan u arko khalad.
In kasta oo ay wax dhaceen, waddamo badan ayaa rabay inay caawiyaan badbaadayaasha Katrina, iyagoo diri kara lacag, cunto, daawo ama wixii ay awoodaan. Gargaarka caalamku aad buu u weynaa oo 854 milyan oo doollar oo ay heleen, waxay u baahnaayeen oo keliya 40 (in ka yar 5%).
Duufaanta Katrina ayaa raadkeeda ku reebtay Mareykanka, laakiin waxaan u maleynayaa in yar oo naga mid ah sidoo kale. Waxay ahayd mid ka mid ah wakiillada ugu muhiimsan ee xoogga dabeecadda. Dabeecad jirta, oo ina daryeesha inta badan, mararka qaarkoodna imtixaanka na gelisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Katrina, waa mid ka mid ah kuwii ugu ba’naa ee soo mara taariikhdayada dhow
Maxay yihiin tallaabooyinka la qabsiga ee isbeddelka cimilada ee laga qaadayo Yurub?
Mareykanku wuxuu la kulmi karaa koror ah 2 beforeC kahor meeraha intiisa kale